အလွန်ကြီးစွာသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်အဘို့အဆယ်ပါးကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြံပေးချက်များ | USAHello ထံမှယောဘသည်အရင်းမြစ်များ | USAHello
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရချင်ပါနဲ့? သငျသညျကွီးစှာသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်! ဒီမှာပါ 10 ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြံပေးချက်များနှင့်သင်တစ်ဦးအမေရိကန်စတိုင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးကူညီပေးဖို့ဗွီဒီယိုတစ်ခု.
တစ်ဦးကကိုယ်ရေးရာဇဝင်သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖန်တီးမယ့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်, သင်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်, သင့်ရဲ့အရည်အချင်းများ, လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ, ပညာရေးနောက်ခံ, နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ. သင်အနေအထားများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအလုပ်ရှင်ပြောထားသည်.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သူတို့တစ်တွေအလုပ်ဘို့သင့်ကိုအင်တာဗျူးချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကြည့်ရှုမည်ကိုပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. ကုမ္ပဏီများကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရာပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရရှိ. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုကြည့်ရှုသောအခါ,, သငျသညျအကွောငျးကိုရှိ 10 အဲဒီလူကိုအထင်ကြီးဖို့စက္ကန့်. အလုပ်ရှင်သင်နှင့်မရသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်စလေိုကွောငျးကိုသတိရပါ. နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအသုံးပွုဖို့သေချာပါစေ “ငါ”, မည့်အစား “ကျွန်တော်တို့”. သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောနေတာဖို့အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ. သို့သော်, ကအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အတော်များများကဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လိုအပ်ပါတယ်.
သေချာဖတ်ရန်လွယ်ကူသည် Make. အဲဒါကိုရဲရင့် Make နှင့်အလုပ်ရှင်များကိုဖတ်ရှုဖို့အတှကျပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းသင်၏နာမကိုတစ်ဦးကိုတိုဗားရှင်းသုံးပြီးစဉ်းစားပါ. သင့်ရဲ့အလယ်နာမည်မပါဝင်ပါနဲ့, ဒါဟာရှည်လျားသည်အထူးသဖြင့်ပါလျှင်.
2. သင်တစ်ဦး "" အမေရိကန်တို့၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သေချာအောင်လုပ်ပါ
တခါတလေ, ဒုက္ခသည်များသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦး WhatsApp ကိုနံပါတ်သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရေအတွက်ကိုကိုသုံးပါ. တစ်ဦး U.S.A ကိုသုံးပါ. ဖုန်းနံပါတ်နှင့် U.S အတွက်စံပုံစံကို အသုံးပြု. ရေး. အေ, ဤကဲ့သို့သောဝင်ရသော- ကွင်းအတွင်းဧရိယာကုဒ်, ပထမသုံးဂဏန်း, ထို့နောက်တစ်ဦး dash, ထို့နောက်လာမည့်လေးနံပါတ်များ: (503) 544-1195.
လွယ်ကူသောမှ re-type အမျိုးအစားကိုသုံးပါ, အမေရိကန်အီးမေးလ်လိပ်စာ. ကဲ့သို့သောနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်အဆုံးသတ်ထားတဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမသုံးပါနဲ့: mohamedhusseinali17352@yahoo.fr. အစား, U.S.A ရိုက်ထည့်ရန်လွယ်ကူသောကိုသုံးပါ. အီးမေးလိပ်စာ. ဥပမာ: mo.ali@gmail.com. နှင့်ဤအီးမေးလ်လိပ်စာကိုစစျဆေးဖို့သတိရ! A ကောင်းဆုံးစိတ်ကူးသင်တို့ရှိသမျှသည်အလုပ် application များအတွက်ပဲအသုံးပြုတဦးတည်းကအီးမေးလ်လိပ်စာရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
3. အလျင်အမြန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လွယ်ကူကြောင်းတစ် layout ကိုအသုံးပြုပါ
ဒီအရာခပ်သိမ်းကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်သေချာအောင်ဆိုလိုတယ်. သငျသညျတိုင်းဧရိယာများအတွက်တူညီသောပုံစံကို အသုံးပြု. နှင့်သေချာအရာအားလုံးလိုင်းများတက်အောင်ဖွငျ့ဤလုပျနိုငျ. သင်လုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အခမဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် template ကို download လုပ်ပါ.
သငျသညျပွောဆိုဆိုဘာသာစကားများစာရင်း, သင်သာမပြောတတ်သို့မဟုတ်သူတို့အားဘာသာစကားများကိုရေးသားလျှင်အပါအဝင်. အင်္ဂလိပ်မပါဝင်ပါနဲ့. သငျသညျသငျ့လျြောသောသဒ်ဒါနှငျ့ကောငျးသောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှိခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စွာဖြစ်ကြောင်းပြသ, အရင်းအနှီး, နှင့်ပုံစံ.
သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေါ်မှစာသားအားလုံးသေချာဖြစ်စေနိုင်သည်တစ်ခုမှာသေးငယ်ပေမယ့်အရေးကြီးသောအပြောင်းအလဲအတူတူဖောင်ဖြစ်ပါသည်. ခဏခဏ, သင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးရာဇဝင်လုပ်နေပါတယ်သည့်အခါ, သင်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းမှသင်၏စာသားအစိတ်အပိုင်းများကိုကော်ပီကူးအထူးသဖြင့်လျှင်, ယင်းဖောင်မတော်တဆပြောင်းလဲသွားစေခြင်းငှါ,. ဒါဟာကိုကြည့်ဖို့ကရှုပ်ထွေးစေသည်. သေချာသည်သင်၏ font ကိုမှန်ကန်အောင်, အားလုံးသင်၏စာသားကို select. ပြီးတာနဲ့အားလုံးစာသား၏မီးမောင်းထိုးပြနေသည်, ယင်းဖောင့်နှင့်အရွယ်အစားကိုရွေးပါ. သုံးစွဲဖို့နှစ်ဦးအားကောင်းသောဖော Times New Roman နှင့် Arial များမှာ. အရွယ်အစားကိုသုံးပါ 10 သို့မဟုတ် 12 ဖတ်ရှုသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လွယ်ကူအောင် font ကို.
သင်တစ်ဦးစကားလုံးစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်း၏အခြားအမျိုးအစားအဖြစ်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထွက်ပေးပို့လိုလျှင်, ကပြောင်းလဲသွားတယ်သို့မဟုတ်လုယူဖျက်ဆီးခြင်းကိုရစေခြင်းငှါ,. ဒါကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့အတိအကျလမ်းကိုကြည့်ရှုမည်သို့မှသာတစ်ဦးကို PDF ဖိုင်အဖြစ်ပြုလုပ်ပေးပို့ဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်. သင်တို့မူကားအဖြစ်ကောင်းစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကို format နဲ့ကယ်တင်ဗားရှင်းရှိသည်သေချာအောင်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မှတည်းဖြတ်စေရန်ဤဗားရှင်းကိုသုံးနိုင်သည်.
၏ဗွီဒီယိုတစ်ခု Watch 10 ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြံပေးချက်များ
ကုမ္ပဏီများအလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်း filter မှကိုယ်ရေးရာဇဝင်ခြေရာခံခြင်းစနစ်များကိုအသုံးပြု. အများဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်, လူသားတစ်ဦးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖတ်ရှုခြင်းမဟုတ်ပါ. အစား, ကွန်ပျူတာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်စကားများအလုပ်ဖော်ပြချက်ကိုက်ညီလျှင်ကြည့်ဖို့ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးက posted အလုပ်ပုံမှန်အား applications များရာပေါင်းများစွာအားလက်ခံတွေ့ဆုံ.
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်ကောင်းကွန်ပျူတာအားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါတယ်. ဒီအကသင်နေတဲ့အလုပ်အကိုင်အ-တိကျတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖန်တီးသေချာအောင်ရန်ရှိသည်ဆိုလိုတယ်. သငျသညျလျှောက်ထားတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, သငျသညျအလုပျဖော်ပြချက်ကိုစစ်ဆေးကြောင့်ရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုက်ညီဖို့လိုတယ်. တစ်ဦးကအလုပ်-တိကျတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အလုပ်ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်တိုင်းစကားလုံးထည့်သွင်းရန်ရှိသည်ပါဘူး. သော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေ. သော့ချက်စာလုံးများကိုအများဆုံးမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်စကားလုံးတွေကိုနှင့်စာပိုဒ်တိုများဖြစ်ကြသည်. အတော်များများကသော့ချက်စာလုံးများအဆိုပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြတယ် “လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု” အပိုင်း. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်ဖြစ်ဖို့လျှောက်ထားလျှင်, သငျသညျစကားများကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းသတိထားမိ “ပုံစံတင်ပို့ရန်”, “ချိန်းအောင်”, နှင့် “စီစဉ်ခြင်း” အများကြီးကိုသုံးပါ.
အလုပ်တစ်ခုတိကျတဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားခြင်းအလွန်ဆင်တူအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူတစ်နည်းစကားလုံးများကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ,. ဥပမာ, သင်တစ်ဦး "အကြောင်းအရာစာရေးဆရာ" စလေိုကွောငျးအလုပ်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါ. သငျသညျရှေ့တျော၌ "အကြောင်းအရာဖန်တီးသူ" အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်. နောက်ထပ်ဥပမာထားသောစာပိုဒ်တိုများပြောင်းလဲနေတဲ့စေခြင်းငှါ “အသစ်အလုပျသမားမြားအဘို့အကြည့်ရှု” သို့ “ဝန်ထမ်းစုဆောင်း”.
ဤဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်နှင့်အလေ့အကျင့်ကြာ. ဖွင့်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအလုပ်ဖော်ပြချက်အထဲက print ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်. သင်ထင်စကားလုံးများကိုအရေးကြီးပါသည်အချို့အချိန် ယူ. မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်လည်းထင်ရှားစေ. သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သို့သူတို့ကိုငါ Add. ရိုးသားမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိရပါ. သငျသညျမဆိုကျွမ်းကျင်မှုမပါဝင်ပါနဲ့. သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည်များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေက်ဘ်ဆိုက်ဟုခေါ်သည် jobscan.co. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ်ဖော်ပြချက် upload တင်လို့ရပါတယ်. သငျသညျအလုံအလောက်စကားလုံးရှိသည်နှင့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများတို့သည်သင်တို့အဘို့လျှောက်ထားအလုပ်နှင့်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကြားကိုက်ညီလျှင်သင်တွေ့နိုင်ပါသည်. အနည်းငယ်ရှိပါတယ် အကယ်., သငျသညျအင်တာဗျူးရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့ပိုထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦး template ကိုသုံးပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွင် ဥပမာစာမျက်နှာပြန်လည်စတင်, သင်တစ်ဦးအခြေခံကိုယ်ရေးရာဇဝင်များအတွက်ရိုးရှင်းသောပုံစံကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုကိုက်ညီဖို့နှုတ်ကပတ်တော်၌ပုံစံကို download လုပ်ပါကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလိမ့်မည်.